ခြစ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူသော့ခတ်တရုတ်ဖိအား | Hongchang
ဖိအားသော့ခတ်ဆန်ခါအတူတကွထစ်အရက်ဆိုင်သော့ခတ်ရန်ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားသုံးပြီးထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထောက်ခံမှုပေးသည်နှင့်စင်ကြယ်သောချောမွေ့ကြည့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာကိုလှိမ့ဝန်များ၏အလေးချိန်ကိုထောကျပံ့နိုငျဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ကွက်ပန်းကန်, သံမဏိခြစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်: အလင်းအလေးချိန်မြင့်မားခွန်အားကြီးမြတ်ဝန်-bearing စွမ်းရည်, ပစ္စည်းများ, လေဝင်လေထွက်နှင့်အလင်းဝန်ခံချက်၏စီးပွားရေးဖြစ်ခြင်း, ခေတ်မီဖက်ရှင်နဲ့ Non-စလစ်များနှင့်များနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ, လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း, ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ကို, ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ။
လျှပ်စစ်ပါဝါ, ဓာတုစက်ရုံများ, ရေနံသန့်စင်စက်ရုံကို, သံနှင့်သံမဏိအကျင့်ကိုကျင့်, စက္ကူ Mil, စက်အဆောက်အဦးစက်ရုံများ, ဘိလပ်မြေ mils, စည်ပင်သာယာအင်ဂျင်နီယာ, မိလ္လာကုသမှု, ဆေးဝါးအပင်များနှင့်စားသောက်ကုန်စက်ရုံများ: ဆန်ခါသံမဏိကျယ်ပြန့်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။
တရုတ် YB / T4001.1-2007 (YB / T4001-1998)
ဗြိတိန် BS4592-1: 1995
အမေရိကန်နိုင်ငံကို ANSI / NAAMM (MBG531-2000)
hot Dip သွပ်ရည်စိမ်နျ Standard
တရုတ် GB ကို / T13912-2002
ဗြိတိန် BS 729
ယူအက်စ်အေ ASTM A123 / A123M-97a
hot-သို့ကျဆင်းလာ galvanizing galvanization.It တစ်ပုံစံပါးလွှာသောဇင့်အလွှာနှင့်အတူဆန်ခါအပေါ်ယံပိုင်းသံမဏိလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, သွပ်ပေမဲ့အပေါ်ယံပိုင်းအထူတစ်သွန်းသောရေချိုးမှတဆင့်သတ္တုဖြတ်သန်းနေဖြင့် 70 ဖြစ်ပါတယ် μ သံမဏိအရက်ဆိုင်ထဲမှာ 3mm ကနေ 5mm အထိသည့်အခါမီတာ အထူ။
Panel များလမ်းဆုံလမ်းခွ-ဓာတ်လှေကားသို့မဟုတ်ရိန်းကြိုးအားဖွငျ့လက်ကိုင်များအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးနည်းလမ်းတခုအတွက်အစုအဝေးကိုနေသောခေါင်းစဉ်: နှစ်ခုစတုရန်းသစ်အသီးသီးဆော့ဝဲအစုအဝေး၏အပေါ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးအပေါ်ချထားပါသည်။ M8 သို့မဟုတ် M10 ခြောက်သို့မဟုတ်လေးခုရှည်လျားသော့ခလောက်ဆန်ခါ၏အဖွင့်မှတဆင့်ထိုးဖောက်နှင့် 3mm အထူ bearing ဘား၏သံမဏိခြစ် up.For အဆိုပါပြားစွဲစေ, ထောင့်သံမဏိလေးကိုအပိုင်းပိုင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့, အောက်ခြေစတုရန်းသစ်နှင့် panel ကများအကြားကဆက်ပြောသည်နေကြတယ် ပုံပျက်သောထံမှ hoisting.Besides, ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်အထူးထုပ်ပိုးစံကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်အခါ။
တပ်ဆင်ဘို့နှစ်ခုစွဲစေမှုနည်းလမ်းများဂဟေဆော်ရာတွင်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ကုန်းနှီးကလစ်များ အသုံးပြု. ရနိုင်, အမြဲတမ်းနဲ့ Non-ဖယ်ရှားပြီးတပ်ဆင်ဘို့, သံမဏိခြစ်မှို-welded သံမဏိ supporting မှဖြစ်ကြသည်။ panel ကိုလေးထောင့်မှာအောက်ကအစီအစဉ်ကိုတွေ့မြင်ကျေးဇူးပြုပြီး welding များအတွက်တည်နေရာသည်ပထမဦးဆုံး bearing ဘားရှည်လျား 3mm မိ filet ဂဟေ x20r မိအတူထောက်ခံမှုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှမှို-welded ဖြစ်ပါတယ်။ ဇင့်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းလွယ်ကူသောဖျက်ဆီးမဟုတ်ကဲ့သို့သောအားသာချက်များရှိသည်သောကုန်းနှီးကလစ်များ, ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို panel ကပိုကောင်းအနည်းငယ်ပိုပြီးကလစ်များရရှိနိုင်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ဝင်များကို fix ဖို့အသုံးပြုနေသောပိုကြီးပြားသည်ကိုအနည်းဆုံးလေးကုန်းနှီးကလစ်ပ်ကိုသုံးပါမူလိမ့်မည်။ ကုန်းနှီးကလစ်များရွေးချယ်ခြင်းသောအခါ, အောက်ပါဇယားကိုဖတ်ရှုပါ။
နောက်တစ်ခု: Special-shaped Steel Grating
Checker သံမဏိပြားနှင့်အတူ compound သံမဏိခြစ်
အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားနှင့်အတူ compound သံမဏိခြစ်
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိခြစ် Panel ကို
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိခြစ်နျ Standard Size ကို
မိုးသည်းထန်စွာ Duty သံမဏိကြမ်းပြင်ခြစ်
မိုးသည်းထန်စွာ Duty လူသွားစင်္ကြသံမဏိခြစ်
hot Dip သွပ်ရည်စိမ်ခြံဝင်းသံမဏိခြစ်
အနိမ့်ကာဗွန် Serrated သံမဏိခြစ်
PVC coated သံမဏိခြစ်
ဘားခြစ်က Round သတ္တုခြစ်ပုံဖော်
သံမဏိခြစ်သည် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းတွင်းအဖုံး
သံမဏိခြစ် Size ကို
welded လှေခါးထစ်ကိုနင်းသံမဏိခြစ်အတူ Checker ပြားနှာခေါင်း
welded သံမဏိဘားခြစ်, ကိုရီးယားသံမဏိခြစ်